अविरल थापा, फाल्गुन ३, २०७४
प्रेम कसरी हुन्छ त ? मानिसले कस्तो प्रेमी खोज्छ ? प्रेम आफैं उत्पन्न हुन्छ कि जबरजस्ती उब्जाइन्छ ? प्रेम आकर्षणबाट सुरु हुन्छ कि समर्पणबाट ? एक जनालाई अर्को कोही किन र के देखेर मन पर्छ ? के कोही मन पर्दैमा उसलाई पाउनैपर्छ ? प्रेम गर्न हैसियत चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ३, २०७४
भ्यालेन्टाइन डेट क्याजुयल मुडको छ भने सोहीअनुरूपको पहिरन छनौट गर्नुपर्छ । फिटिङ जिन्सका साथमा अफ शोल्डर पिस वा सिम्पल लङ टप लगाउन सकिन्छ । फिटेड ब्लेजर लेडर ज्याकेटका साथमा लेस ट्रिम ट्याङ टप उपयुक्त हुन्छ । यो शैलीमा हिल जुत्ता नै लगाउन सकिन्छ । वातावरणमा चिसोपन कायमै रहने भएकाले आफ्नो डेटमा चिसोपनको अनुभव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
नायिका रेखा थापाप्रति समर्पित पर्शुराम
पर्दामा देखिने सुन्दर अनुहारप्रति हरकोहि आकर्षित हुन सक्छ । तर, गायक पर्शुराम रिजाल भने अभिनेत्री रेखा थापाप्रति पूर्णरुपमा समर्पित भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
आँचललाई पाउँन पलको अनसन
प्रणय दिवस भर्खरै सकिएको छ । युवापुस्ता माझ निक्कै नै लोकप्रिय बन्दै गएको यो दिवस विभिन्न किसिमले सेलिब्रेसन भयो । कलाकारहरुले पनि आफ्नै तरिकाले प्रणय दिवस मनाए । आफ्नै प्रेमीका पाउँ भन्दै अभिनेता पल शाह भने अनसन बसेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पूर्वी नेपाल झापाको अर्जुनधाराबाट चलचित्र ‘जय भोले’को छायांकन सुरु भएको छ । अर्जुनधारा स्थित जलेश्वरधाम शिव मन्दिरमा मुहुर्त सट खिचेसँगै चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ भएको हो । यहि चलचित्र मार्फत निर्माता, निर्देशक र अभिनेता अशोक शर्मा चलचित्र निर्देशनमा फर्किएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
मिस ग्रेस काठमाडौं जम्बु शेर्पा
गत साता राजधानीमा सम्पन्न ‘मिस ग्रेस काठमाडौं’को उपाधि जबमु शेर्पाले जितेकी छिन् । ‘मिस ग्रेस काठमाडौं’को यो वर्षको संस्करणमा लिम्बुले शिर्ष उपाधि जित्नुका साथै मिस ट्यालेन्टको उपाधि पनि आफ्नै पोल्टामा पारेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
शुरु भयो बक्स अफिस
नेपाल चलचित्र बिकास बोर्डले फाल्गुन ७ देखि लागु हुनेगरी बक्स अफिस प्रणाली ‘इ टिकेटिङ’ शुरु गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा बोर्डले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बक्स अफिस प्रणाली लागु भएको जानकारी दिइएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
कान्तिपुर पब्लिकेसनमा रक्तदान
फागुन ७ गते पब्लिकेसन स्थापना भएको २५ पुरा भएर २६ वर्ष लाग्ने छ । कान्तिपुरले प्रत्येक वर्ष वार्षीक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
इभेन्ट बेटर ग्यालेक्सीद्वारा आयोजित १५औं संस्करणको प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस तथा लिटिल प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेसमा राजश्री गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बाजी मारेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
मायाले रेटी दुखायो मुटु
गायक सागर अधिकारी ‘शरद’को आवाजमा एक नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । विपिन मर्मको शब्द तथा विपिन घिमिरेको संगीतमा ‘मायाले रेटी दुखायो मुटु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा देवेन्द्र नेवाले संगीत संयोजन गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को मनसँग मन
अभिनेत्री केकी अधिकारीको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । पहिलो गीतबाटै राम्रो प्रतिकृया बटुलिरहेको चलचित्रको दोस्रो गीत पनि रोमान्टिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्